Mmanụ aṅụ sitere na clover: ọdịnaya calorie, mejupụtara, uru na nsogbu - Anumanu - 2020
Ọkachasị anụcha mmanụ aṅụ: amaokwu, bara uru ma sie ike inweta
Ọkụ ọma na-acha uhie uhie A na-ewere ya dịka ihe dị iche iche maka ma ndị okenye ma ụmụaka. Nke a dịgasị iche iche nwere nnukwu ọnụọgụ bara uru ma jiri ya na omenala ọdịnala na cosmetology. Na n'isiokwu a, anyị ga-amụta otu esi amata ọdịiche nke ezigbo mmanụ aṅụ na-acha ọcha site na clover si adịgboroja, otú o si bara uru na ihe ndị ọ na-eme.
Kedu ka onye isi ala ahụ si arụ ọrụ
Mmanụ aṅụ ngwa
Na ndiife na nkà mmụta ọgwụ
Kedu ka esi amata ọdịiche dị iche?
Nri na ọdịdị
Donnic Amber ezigbo obi ụtọ ma na-esi ísì ụtọ ka ọ na-esi ísì ísì. Nri kpamkpam na-adabere na ihe okooko osisi ndị aṅụ na-anakọtara nectar. Mmanụ aṅụ, nke anakọtara site na okooko osisi ọcha, nwere uto na-egbukepụ egbuke egbuke, ma ihe ngwọta ya adịghị ike. Na nchịkọta sitere na clover na-acha odo odo, uto ahụ adịghị egbuke egbuke, ọ na-eme ka ọ bụrụ nke na-adịghị ike, ma ọ bụ nectar site na okooko osisi odo ndị nwere ibu ọrụ ka ukwuu. Mmanụ aṅụ dị ntakịrị na-acha ọcha ma ọ bụ amba amba na agba. Ịkpọ mkpu, ọ na-enweta agba ọcha.
Ngwongwo ndi nlekota bu otu n'ime ihe ndi mmadu kachasi ike karia na ihe ndi mmadu na-acho ogwu na ihe ndi ozo n'uwa, ha abughi nani mmanu mmanu, kamakwa wax, pollen, propolis, zabrus, perga, jelii eze na anu anu.
Dị ka e kwuru, a na-eji mmanụ aṅụ na-acha odo odo na-acha odo odo na ọcha. Osisi a, nke a makwaara dika buckwheat nke ohia, sitere na ulo legume, bu otu n'ime osisi olulu kacha mma nke okpomoku. Ọ na-acha ọkụ n'oge okpomọkụ, ya mere, aṅụ na-achịkọta ya n'oge niile. Enwere ike ịchọta ya, dị ka ahihia, n'ọzara dị iche iche na ndagwurugwu. Ụfọdụ ndị na-aṅụ aṅụ kụrụ osisi a n'ụzọ dị irè, n'akụkụ ha apiaries.
Ị ma? A na-etinye okooko osisi na epupụta nke klova na-acha odo odo na kọfị na pawuda.
Donne "amber" nwere:
fructose - si 40 ruo 50%;
glucose - site na 45 ruo 55%;
maltose - site na 3.5 ruo 4.2%;
sucrose - banyere 0,5%.
100 g nke ngwaahịa ahụ nwere 74.7 g nke carbohydrates, 0,8 g nke ndị na-edozi ahụ, ọmarịcha uru ya dị 315 kcal. Nakwa na nchịkọta nke anụ a na-agụnye vitamin B, PP, K, E na C.
Ghọta onwe gị na ụdị mmanụ aṅụ dị iche iche dị ka chestnut, buckwheat, acacia, acacia, ugu, anyụ, phacelia, linden, rapeseed, mmanụ aṅụ dandelion na mmanụ aṅụ sitere na pine.
Melilot, dịka osisi nwere ọtụtụ ọnụ ahịa bara uru na, ya mere, mmanụ aṅụ si na ya dịkwa oke uru, o nwere nnukwu ọnụọgụ na ọgwụgwọ. Ọ bara ezigbo uru na ọgwụgwọ atherosclerosis, na-enye aka ịkwụsị mkpụmkpụ ume, nwere antispasmodic, mgbochi mkpali, antibacterial, immunostimulating, diuretic, analgesic na nkwụsịtụ mmetụta. A na-atụ aro Donnik maka ndị inyom n'oge ime na lactation, ebe ọ bụ ọgaranya na vitamin.
Ọ dị mkpa! N'ime oge ị na-ara ara kwesịrị ịṅa ntị na mmeghachi omume nke nwa ahụ, na ngosipụta nke allergies, oriri kwesịrị ịkwụsị ma kpọtụrụ onye na-agwọ nwa gị.
Nectar site na clover na-egosipụta uru ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla, ma ọ bụ ihe oriri nke mmanụ aṅụ dị ọcha ma ọ bụ ụdị ngwakọta. Mana ka, a na - enweta ọgwụgwọ kachasị mma na ọgwụgwọ na mgbochi kwesịrị ekwesị site na iji ndenye ọgwụ ndị anwaleworo kemgbe afọ.
Melilot nwere mmetụta dị mma na ọrụ nke afọ na eriri afọ, ya mere, a na-ewerekarị ọgwụ na-adabere na ya iji normalize ọkwa nke acidity n'ime afo. Ntụziaka maka ọgwụ a dị nnọọ mfe - 1 ngaji nke bee nri na-diluted na 120 ml nke mmiri ọkụ. Na ala acidity, a ghaghị ịṅụ ihe ngwọta na nkeji iri na abụọ tupu oge nri, na elu acidity, minit 50-60
Maka ịmalite ọrụ akụrụ, a na-atụ aro ka ị gbanye 3 tablespoons nke nectar na 250 ml nke birch sap. Were ọgwụ a ị chọrọ ugboro atọ n'ụbọchị. Na ihicha akụrụ ka na-etinye silik silik.
Ntụziaka maka cystitis. Ọ dị mkpa ịkwanye otu ngaji mmanụ aṅụ na jelii eze, wee ṅụọ ya na decoction nke nkịtị bearberry na horsetail. Were ọgwụ a kwesịrị ugboro abụọ n'ụbọchị maka ụbọchị ise.
Ọ bụrụ na mmadụ na-enwe ụra ehighị ụra, ị nwere ike ịṅụ otu spoonful nke mmanụ aṅụ diluted na mmiri ọkụ tupu ị lakpuo ụra. Ọ na-enye aka ime ka usoro ahụ ụjọ dị jụụ ma mee ka ụra dị mma.
N'ịbụ ndị na-eto eto na-adịghị mma, ndị nne na-eto eto kwesịrị iri otu teaspoon nke na-ekpuchi anụ ahụ tupu ha eri nri.
Maka ọgwụgwọ ọrịa ndị na-egbu egbu na nke ọrịa mgbọrọgwụ, otu okpukpu nke mmanụ aṅụ kwesịrị ịkpụgharị na ihe ọṅụṅụ nke otu black radish ma were ọgwụ a otu ngaji maka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu awa tupu nri.
Ọ dị mkpa! Mgbe mmanụ aṅụ na-agbakwunye na tii ma ọ bụ naanị mmiri, ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri mmiri ekwesịghị ịba 60 Celsius, ma ọ bụghị ya, ọ ga-efunahụ àgwà ya bara uru.
A na-eji "amber" Donnic eme ihe na cosmetology maka ịgwọ ọrịa ọrịa anụ ahụ, na-ehicha ma meziwanye ọnọdụ anụ ahụ. Maka ịsacha ya agbazere na mmiri ọkụ. Usoro na ngwọta a na-enyere aka wepu mmiri, ihe otutu, ihe otutu, wepupu abụba sitere na pores.
Maka nsogbu akpụkpọ anụ, ọ bara uru iji nkpuchi dabere na clover na kukumba ọhụrụ. Were 0.2 n'arọ nke cucumbers grated na 1 tsp. nectar na kpaliri. Nke a na ihe nkpuchi moisturizes na disinfects anụahụ.
Ịhọrọ donnikovy mmanụ aṅụ, ṅaa ntị na agba na ọkpụrụkpụ. "Amber" ahụ a na-eti mkpu nwere àgwà ọcha dị ka bọta ma ọ bụ mmanu mmiri. N'ime ihe owuwu, ọ dị ka obere kristal a ma ama. Nakwa nlezianya anya na ísì, ọ ga-enwe ekpomeekpo vanilla ọkụ, ma ọ bụrụ na o nwere ísì ísì ụtọ nke ọma, mgbe ahụ ị ga - enwe mmanụ aṅụ alfalfa tinyere mgbakwunye vanilla.
Ị ma? N'asụsụ Russian ochie, okwu ahụ bụ "ala" (aha "clover" sitere na ya) pụtara gout.
Dị ka anyị mụtaworị, mmanụ aṅụ dị ụtọ nwere ọtụtụ ihe bara uru, mana, dịka iche iche, Ya onwe ya kwa, nwere nsogbu. A naghị atụ aro ka ị jiri ya: maka ụmụ ruo afọ atọ, ọ bụrụ na mmadụ nwere ahụ nrịarịa na aṅụ na ngwaahịa ha; ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-ekesa ọrịa ahụ, ebe ọ bụ na clover na-ezo aka mkpo. Site na ikikere nke dọkịta, ndị mmadụ nwere ọrịa shuga, oke oke na ọbara mgbali elu kwesịrị iwe.
Mmanụ aṅụ sitere na clover nwere ọtụtụ ihe bara uru nke nwere ike inye aka n'ịgwọ ọtụtụ ọrịa, ma ọ bụrụ na ị nwere contraindications iji ya, ọ ga-aka mma inye ya.